संघिय समाजवादी फोरम प्रदेश १ मा अरु भन्दा बलियो बन्दैछ : केन्द्रिय सदस्य बस्नेत – Nirantarkhabar
सरकारको काम गराई चित्तबुझ्दो छैन्
संघिय समाजवादी फोरम नेपाल अहिले सत्ताधारी दल हो । प्रदेश २ को हकमा सरकार नेतृत्वकर्ता दल हो । यो पार्टीले अहिले सरकारमा अफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सवालमा भुमिका प्रभावकारी बनाउने र संगठन विस्तारको कामलाई पनि तिब्रता दिने जनाएको छ । यसै अनुसार पार्टीले प्रदेश १ मा युवा कमिटी गठन तयारी पनि गरिरहेको छ । प्रदेश स्तरिय युवा कमिटी गठनको तयारी स्वरुप प्रदेशस्तरिय युवा भेला तथा छलफलमा पुर्व आएका बेला संघिय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा युवा इन्चार्ज एवम् पार्टी प्रचार विभाग सदस्य विष्णुजंग बस्नेतसँग निरन्तर खबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको अंश ।
यहाँको नियमित बसाई त काठमाण्डौ नै हो , पुर्व के को लागि आउनुभएको हो ?
म पार्टीको सिसिएम(केन्द्रिय कमिटी सदस्य) र युवा इन्चार्ज पनि हुँ । युवा इन्चार्जको हैसियतमा प्रदेश १ मा युवा कमिटी गठनको शिलशिलामा म पुर्व आएको हो । गत शनिबार प्रदेश स्तरिय युवा भेला र छलफल थियो तयारी वैठक थियो त्यसैको लागि म पुर्व आएको हो ।
केही समय अघिसम्म तपाईको पार्टी सदावाहार आन्दोलनकारी जस्तै थियो । तर अहिलेको कुरा गर्ने हो भने तपाईको पार्टी सरकारमा छ । परिस्थिति फेरिएसँगै पहिचान पनि फेरिएको जस्तो पनि देखिन्छ । हिजो आन्दोलनकारी दल आज सत्ताधारीको रुपमा रहँदा हिजोका माग मुद्दाहरु चाहि जहाँको त्यहीँ छन् नी हैन?
तपाईले भन्न खोज्नुभएको ठिकै पनि हो । हिजो सडक संघर्ष गरिरहेको पार्टी किन आज तुरुन्तै सरकारमा गयो भन्ने कुरा पनि हो । कतिपय अवस्था कस्तो पनि हुन्छ भने सडकबाट मात्रै सबै कुरा पुरा हुनसक्दैन सदन र सरकारमा पनि जानूपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको वहुमत त अलरेडी थियो तर अहिलेको संविधान अनुसार २ तिहाई वहुमत नभै संविधान संसोधन हुने अवस्था छैन् । त्यसैले सरकारमा जानुभन्दा अघि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविच केही सहमति भएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभएको छ । सम्भवतः तिहार छठ पछि संविधान संसोधनको प्रकृया सदनमा अघि पनि बढ्छ ।
तपाईले यसो भनिरहँदा तपाईहरुको आन्दोलनमा जसले साथ दिए अनि चुनावमा मत दिएर तपाईहरुलाई जिताएर पठाए उनीहरु अहिले निराश हुने अवस्था पो छ की ? भन्ने नै हाम्रो जिज्ञासा हो फेरी पनि ।
छैन यो एकदमै गलत कुरा हो । अहिलेका जनता उहिले सात सालको जस्तो हुनुहुन्न । उहाँहरुले हामी के गरीरहेका छौं भन्ने राम्ररी बुझ्नुभएको छ । हामी उहाँहरुको अभिलाषा पुरा गर्ने दौडमा नै छौं ।के चै हो भने हाम्रा प्रतिद्वन्द्धीले गलत प्रचार गर्यामात्रै हुन् । हाम्रो पार्टी पहिले भन्दा अझै मजवुत भएर गैरहेको छ ।
पछिल्लो चुनावी परिणामलाई हेर्दा २ नम्बर प्रदेशमामात्रै तपाईको पार्टीको अवस्था मजवुद देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा कमजोर नै देखियो । अहिले के छ ? केही सुधार आएको होला?
ठिकै हो । हाम्रो २ नम्बर प्रदेशमा अवस्था राम्रो हो । अन्य क्षेत्रमा सोचेअनुसार परिणाम नआएकै हो त्यो मैले पनि स्विकार्छु पार्टीले पनि स्विाकारेकै छ । तर अहिले पछिल्लो समयमा खस समावेसी राष्ट्रिय पार्टी,संघिय समाजवादी पार्टी र मधेशी जनाधिकार फोरम मिलेर जुन संघिय समाजवादी फोरम बनायौं । त्यसपछि पनि अन्य २ दर्जन जति साना साना पार्टी र संगठनहरुलाई एकतावद्ध गरेका छौं । लिम्वुवान आन्दोलन गरेका केही समुहहरु हाम्रो पार्टीमा आउनुभएको छ । नवराज दाहालले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लोकतान्त्रिक ट्रेडयुनियन भन्ने पनि हाम्रोमा समाहित भैसकेको अवस्था छ । कम्युनिष्टको एकतामा असन्तुष्टहरु पनि हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम छ । कांग्रेस कम्युनिष्ट तत्कालिन माओवादीले दिएका आस्वासनहरु पाँच प्रतिशत पनि पुरा नभएको अवस्था छ । यसले गर्दा निराश बनेका र कुरा बुझेकाहरु सबै हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम तिब्र भएकाले अब १ नम्बर प्रदेश ३ नम्बर प्रदेश लगायत सबै क्षेत्रमा हाम्रो पार्टी मजवुद बन्दै गएको छ ।
प्रदेश २ मा त सरकारको नेतृत्व नै तपाईको पार्टीले गरिरहेको छ । प्रदेश २ को नामाकरण गर्ने र स्थाई राजधानी तोक्ने विषयमा सुझाव दिन भनेर भर्खरै मात्रै प्रदेश सरकारले आयोग पनि बनाएको छ । यहाँको पार्टी भित्र चाहि केही छलफल भैरहेको छ की छैन् प्रदेश २ को नामको सवालमा ?
हाम्रो पार्टीमा ३ सयको आसपासमा हामी केन्द्रिय सदस्य छौं । त्यो भएकाले चाहने वित्तिकै तत्काल केन्द्रिय कमिटि वैठक बसिहाल्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यो बारे जिम्मेवारी कार्यसम्पादन समितिलाई हुन्छ । त्यो पदाधीकारीहरुको एउटा टिम हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरुले निर्णय गरेर नै त्यो सबै अघि बढिरहेको होला । २ नम्बर प्रदेश सरकारमा राजपा र हामी सत्तासाझेदार भएकाले पार्टीसँग कोअर्डीनेसन गरेर नै सबै भैरहेका होलान् ।
यहाँले राजपाको कुरा ल्याउनुभयो । २ नम्बर प्रदेश सरकारमा यहाँहरुको साझेदार पनि हो राजपा । तर उसँगको सम्बन्ध पनि बेला बेलामा चिसो तातो भैरहन्छ नी हैन? आन्दोलन गर्दाताका देखि अहिले सम्म पनि यो देखिन्छ नी ?
सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएका श्रीमान् श्रीमतीविच त बेलाबेलामा झगडा पर्छ भने राजनितिक दलबिच बेलाबेलामा टिकाटिप्पणी आलोचना हुनु स्वाभाविक नै हो । किनभने सबैले सबैलाई सतप्रतिशत चित्त बुझाउन सकिदैन ।
यहाँको पार्टीले समावेसिता सहभागिताका कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउने गर्दछ । आफ्नै पार्टी कमिटी चै कतिको समावेसी छ त ?
हाम्रो एकदम समावेसी छ । ३३ प्रतिशत महिलाको कुरापनि छ । कांग्रेस कम्युनिष्टले हामी पुरा गर्न सक्दैनौ भनेर निर्वाचन आयोगमा पत्र पनि पठाइसके तर हामीले ३३ प्रतिशत महिलापनि सहभागी गराएका छौं । अन्य हिसावबाट पनि समावेसी छ । जस्तो मधेसीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवले ,आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले, नेवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठले, खसआर्यको प्रतिनित्व गर्नुभएको छ युवराज कार्कीले,शिल्पी समुहको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ दानवहादुर विश्वकर्माले । यो हिसावले हेर्दा हाम्रो पार्टी समानुपातिक समावेसी नै छ ।
पार्टीमा यहाँको जिम्मेवारी पनि युवासम्बन्धी नै छ । युवाहरुलाई पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण के छ ?
अहिले युवाहरु नेपालमा काम पाइदैन भनेर विदेशीने क्रम तिब्र छ । युवा विदेशिन रोक्नु र विदेशिएकालाई फर्काउनु चुनौती छ । नेपालमा केही हुन्न भन्ने सोचले गर्दा युवाहरुमा फ्रस्टेसन को अवस्था देखिन्छ । पहिलो कुरा त नेपालको शिक्षा निति सही हुनुपर्यो । युवाले आफुले चाहेको क्षेत्रमा जानलाई त्यससम्बन्धी ज्ञान सिप दक्षता उसले प्राप्त गर्न सकोस त्यस्तो वैज्ञानिक र व्यवसायिक शिक्षा निति हुनुपर्छ भन्छौं हामी । असल युवा सक्षम युवा दक्ष युवा बनाउन शिक्षाको गुणस्तर १ नम्बर अपरिहार्य छ ।
तर अहिले लागु पदार्थ दुव्र्यसनी मदिरामा पनि युवाहरु फस्दै गैरहेको देखिन्छ यसले गर्दा युवालाई असर पारेको छ । परिवार गाउँ समाज हुदै राष्ट्रले नै होनहार व्यक्ति वा प्रतिभा गुमाइरहेको छ । यो समस्यालाई गम्भिर भएर सोच्नु पर्छ । रोक्नुपर्छ ।
पार्टीमा तपाइले युवा विभागकै नेतृत्व लिनुभएको छ । युवासम्बन्धीका सांगठनिक कामहरु के कसरी अघि बढाइरहनुभएको छ ?
हाम्रो संगठनमा युवाहरुको आकर्षण बढेको छ । हाम्रोमा आफ्नै व्यापार व्यवसाय गर्दै केही समय निस्वार्थ भएर पार्टीलाई समय दिने युवाहरु हुनुहुन्छ । विचारमा पोख्त हुनुहुन्छ । र संगठन विस्तारको क्रम पनि देशैभर तिब्र रुपमा वढिरहेको छ ।
केपीओली नेतृत्वको सरकारमा तपाईको पार्टी पनि सहभागी छ । यो सरकारले समृद्धिको नारा पनि दिएको छ । आशा पनि धेरैले गरेर नै मत दिएका पनि हुन् । तपाई अब कुनै पार्टी नेता भएर हैनकी एउटा नेपाली नागरिक त्यसमा पनि युवा भएर मुल्यांङ्कन गरेर भन्दिनुस की यो सकारको अहिलेसम्मको काम गराई कस्तो छ ?
मैले सामान्य युवाको हिसावले हेर्दा यो सरकारको काम गराइ चित्त बुझ्दो छैन् । सरकारमा हाम्रो पार्टीकै भुमिकाको कुरा गर्ने हो भने पनि हामी त पछि आएको हो । केपी ओली सरकारले गरेको एउटामात्रै राम्रो काम भनेको दशैंको विदा कटौती गर्यो त्यो मात्रै राम्रो काम छ । अरु त जताततै डामाडोल छ । भुकम्प पिडित हेर्नुस मेलम्चीको पानीको कुरा मात्रै छ । शिक्षाको गुणस्तर जिरो छ । शिक्षकहरु दलको झोला बोकेर हिड्छन् ।
त्यसो भए अब सरकारले कसरी अघि बढ्नुर्यो त ? सरकारमा त यहाँको पार्टी पनि सहभागी छ ।
हामी त रुमालको विचमा फुल बुट्टा हुन्छ नी त्यस्तो मात्रै हौ सरकारमा भुमिकाको कुरा गर्नुपर्दा ।
पन्छिने चै राम्रै अवसर छ तपाईहरुलाई पनि हैन?
हैन पन्छिने अवसर हैन वास्तविक कुरा भन्नै पर्छ । यो सरकारमा हामीले जम्मा २ वटा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी पाएका छौं । त्यही भएर यो भनेको रुमालको फुलबुट्टा भरेजस्तै मात्रै हो । अब २ नम्बर प्रदेशमा चै हाम्रो नेतृत्वको सरकारले धेरै कामहरु गर्दैछ । फेरी त्यहापनि प्रदेश सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडी भने जस्तै भएको छ । तर पर्याप्त अधिकार पाएको खण्डमा २ नम्बर प्रदेशले नमुनाको रुपमा चामत्कारिक विकास गर्नेछ । यो मेरो र मेरो पार्टीको तर्फबाटै प्रतिवद्धता पनि भयो ।